အီရတ်အသင်းကို ကိုင်တွယ်ဖို့ သဘောတူညီမှုရခဲ့တဲ့ အဲရစ်ဆင် Eriksson
အီရတ်အသင်းကို တာဝန်ယူကိုင်တွယ်တော့မယ့် အဲရစ်ဆင် Eriksson
26 Jul 2018 . 6:56 PM
အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ နည်းပြဟောင်း အဲရစ်ဆင် Eriksson ဟာ အီရတ်အသင်းကို တာဝန်ယူကိုင်တွယ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီရတ်နည်းပြရာထူးအတွက် ဝါရင့်နည်းပြ အဲရစ်ဆင် Eriksson နဲ့ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်း တရားဝင်ကြေညာမှုတွေ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်ထဲက တူရကီနိုင်ငံ၊ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့မှာ အီရတ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ အဲရစ်ဆင် Eriksson တို့ ဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေခဲ့တာပါ။ အဲရစ်ဆင် Eriksson ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ယူဘီ Rubie က အခုတစ်ပတ်အတွင်း အဲရစ်ဆင် Eriksson က သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကို ဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ရက်ပိုင်းအကြာမှာပဲ အီရတ်အသင်းနဲ့ သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိ အင်္ဂလန်အသင်းကို ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ အဲရစ်ဆင် Eriksson ကို အာရှကိုယ်စားပြု အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ အီရတ်အသင်းမှာ မြင်တွေ့ရတော့မှာပါ။ အဲရစ်ဆင် Eriksson ဟာ နည်းပြဘဝတစ်လျှောက် မန်စီးတီး၊ လက်စတာ၊ မက္ကဆီကို၊ အိုင်ဗရီကို့စ်တို့လို အသင်းတွေကို ကိုင်တွယ်ခဲ့သလို တရုတ်စူပါလိဂ်မှာလည်း ကျင်လည်ခဲ့ပါတယ်။ အဲရစ်ဆင် Eriksson ကိုင်တွယ်သွားမယ့် အီရတ်အသင်းဟာ လက်ရှိကမ္ဘာ့အဆင့်ရပ်တည်မှု (၈၉)နေရာမှာ ရပ်တည်နေပြီး အာရှဖလားပြိုင်ပွဲမှာ အောင်မြင်မှုရရှိဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အီရတ်အသင်းအနေနဲ့ အာရှဖလားအုပ်စုအဖွင့်ပွဲစဉ်အဖြစ် ဇန်နဝါရီလ (၄)ရက်နေ့မှာ ပါလစ္စတိုင်းအသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Photo:Essence of Light Photography, Sky Sports
အီရတျအသငျးကို တာဝနျယူကိုငျတှယျတော့မယျ့ အဲရဈဆငျ Eriksson
အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ နညျးပွဟောငျး အဲရဈဆငျ Eriksson ဟာ အီရတျအသငျးကို တာဝနျယူကိုငျတှယျတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။ အီရတျနညျးပွရာထူးအတှကျ ဝါရငျ့နညျးပွ အဲရဈဆငျ Eriksson နဲ့ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပွီးဖွဈကွောငျး သတငျးထုတျပွနျခဲ့ပွီး လာမယျ့ရကျပိုငျးအတှငျး တရားဝငျကွညောမှုတှေ ပွုလုပျသှားမှာဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ သီတငျးပတျထဲက တူရကီနိုငျငံ၊ အစ်စတနျဘူလျမွို့မှာ အီရတျဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျ တာဝနျရှိသူတှနေဲ့ အဲရဈဆငျ Eriksson တို့ ဆှေးနှေးမှုတှေ ပွုလုပျနခေဲ့တာပါ။ အဲရဈဆငျ Eriksson ရဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရပုဂ်ဂိုလျတဈဦးဖွဈတဲ့ ယူဘီ Rubie က အခုတဈပတျအတှငျး အဲရဈဆငျ Eriksson က သူ့ရဲ့အနာဂတျကို ဆုံးဖွတျသှားမှာဖွဈကွောငျး ပွောကွားခဲ့ပွီး ရကျပိုငျးအကွာမှာပဲ အီရတျအသငျးနဲ့ သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
၂၀၀၁ ခုနှဈကနေ ၂၀၀၆ ခုနှဈအထိ အင်ျဂလနျအသငျးကို ကိုငျတှယျခဲ့တဲ့ အဲရဈဆငျ Eriksson ကို အာရှကိုယျစားပွု အသငျးတဈသငျးဖွဈတဲ့ အီရတျအသငျးမှာ မွငျတှရေ့တော့မှာပါ။ အဲရဈဆငျ Eriksson ဟာ နညျးပွဘဝတဈလြှောကျ မနျစီးတီး၊ လကျစတာ၊ မက်ကဆီကို၊ အိုငျဗရီကို့ဈတို့လို အသငျးတှကေို ကိုငျတှယျခဲ့သလို တရုတျစူပါလိဂျမှာလညျး ကငျြလညျခဲ့ပါတယျ။ အဲရဈဆငျ Eriksson ကိုငျတှယျသှားမယျ့ အီရတျအသငျးဟာ လကျရှိကမ်ဘာ့အဆငျ့ရပျတညျမှု (၈၉)နရောမှာ ရပျတညျနပွေီး အာရှဖလားပွိုငျပှဲမှာ အောငျမွငျမှုရရှိဖို့ ပဈမှတျထားနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အီရတျအသငျးအနနေဲ့ အာရှဖလားအုပျစုအဖှငျ့ပှဲစဉျအဖွဈ ဇနျနဝါရီလ (၄)ရကျနမှေ့ာ ပါလစ်စတိုငျးအသငျးနဲ့ ယှဉျပွိုငျကစားသှားရမှာဖွဈပါတယျ။
by Ko Kyue . 12 mins ago